Wiki13 အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
Wiki13 အတွက် ဆွေးနွေး ပိတ်ပင်တားဆီးမှု မှတ်တမ်း အပ်လုပ်တင်ထားသည်များ မှတ်​တမ်း​များ​ အလွဲသုံးစားပြုမှု မှတ်တမ်း
၁၃:၁၉၊ ၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၈‎ APK (file format) ‎ Requesting speedy deletion (Nonsense). လက်ရှိ
၁၃:၅၁၊ ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း -၈‎ အရေးမကြီး ဂျပန်နိုင်ငံ ‎ 136.228.174.235 (ဆွေးနွေး) ၏ ပြင်ဆင်မှုများကို 123.253.228.162 ၏ နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မူသို့ နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း SWViewer [1.4]
၂၂:၁၆၊ ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၅၄၈‎ အရေးမကြီး Alexa Internet ‎ 37.111.6.144 (ဆွေးနွေး) ၏ ပြင်ဆင်မှုများကို Aungookingofcelestials ၏ နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မူသို့ နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း
၂၁:၂၅၊ ၂၇ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၇‎ အရေးမကြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ‎ (GR) File renamed: File:Tarlac Expressway - panoramio (2).jpg → File:SCTEX from Clark Interchange - panoramio.jpg Criterion3(obvious error) · This is SCTEX, not TPLEX.
၁၆:၂၅၊ ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၀‎ အရေးမကြီး ဆွေးနွေးချက်:အို (အက္ခရာ) ‎ +delete, test
၀၉:၁၃၊ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၁၄ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း -၂‎ အရေးမကြီး မိုက်ကယ် ဂျက်ဆင် ‎ Reverted edits by 70.190.219.177 (talk) to last revision by Rotlink
၁၁:၂၁၊ ၁၂ မေ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၁၈၄၅၃‎ အရေးမကြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ‎ Reverted edits by 92.225.109.215 (talk) to last revision by Thetoo
၁၅:၀၅၊ ၃၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂‎ အရေးမကြီး မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ ‎ rv map replacing nonsense
၁၅:၀၅၊ ၃၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၆‎ အရေးမကြီး ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ ‎ rv map replacing nonsense
၁၅:၀၅၊ ၃၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂‎ အရေးမကြီး ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ ‎ rv map replacing nonsense
၁၅:၀၅၊ ၃၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း -၆‎ အရေးမကြီး ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံ ‎ rv map replacing nonsense
၁၁:၄၂၊ ၂၂ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၉၇‎ ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံ ‎ Reverted 1 edit by 193.63.61.35 (talk). (TW)
၁၇:၃၄၊ ၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၈၂၀၄‎ ဂျို့စ် ဂေဗီယို ဗမ်းန် ‎ Undo revision 126192 by 46.99.251.39 (talk)
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:ဆောင်ရွက်ချက်များ/Wiki13" မှ ရယူရန်